Izindaba - Inqubo yokususa itshe esigayweni sefulawa
Esigayweni sefulawa, inqubo yokususa amatshe kukolweni ibizwa nge-de-stone. Amatshe amakhulu namancane anezinhlayiya ezihlukene ngobukhulu kunalawo kakolweni angasuswa ngezindlela ezilula zokuhlola, kuyilapho amanye amatshe anosayizi ofanayo nokolweni adinga imishini ekhethekile yokususa amatshe.
I-de-stoner ingasetshenziswa ngokusebenzisa amanzi noma umoya njengendlela ephakathi. Ukusetshenziswa kwamanzi njengomuthi wokususa amatshe kuzongcolisa imithombo yamanzi futhi akuvamile ukuthi kusetshenziswe. Indlela yokususa itshe ngokusebenzisa umoya njengesiphakathi ibizwa ngokuthi itshe lendlela eyomile. Indlela eyomile okwamanje isetshenziswa kabanzi ezindaweni zokugaya ufulawa, futhi imishini yayo eyinhloko umshini wokususa amatshe.
I-Destoner ikakhulukazi isebenzisa umehluko esivinini sokumiswa kukakolweni namatshe asemoyeni ukususa amatshe, futhi indlela yokusebenza enkulu ingaphezulu lesisefo lelitshe. Ngesikhathi somsebenzi, umsusi wamatshe udlidlizela ohlangothini oluthile futhi wethula ukuhamba komoya okungena ngaphakathi, okuhlolwa ngumehluko wejubane lokumiswa kukakolweni namatshe.
Inqubo yokukhetha esigayweni sefulawa kakolweni
Enqubeni yokuhlanza ufulawa kakolweni, ukungcola okuhlelwa okungafani neze nokolweni ezintweni zokusetshenziswa ngomehluko wobude noma ukumila okusanhlamvu kubizwa ngokuthi ukukhetha. Ukungcola okufanele kususwe ezintweni ezikhethiwe kuvamise ukuba yibhali, i-oats, amantongomane nodaka. Phakathi kwalokhu kungcola, ibhali nama-hazelnuts kuyadliwa, kepha umlotha, umbala nokunambitheka kwawo kunomthelela omubi kulo mkhiqizo. Ngakho-ke, lapho umkhiqizo ufulawa webanga eliphakeme, kuyadingeka ukusetha ukukhetha enqubeni yokuhlanza.
Ngoba ubukhulu bezinhlayiyana nesivinini sokumiswa kokungcola okunjalo kufana nalokho kukakolweni, kunzima ukususa ngokuhlola, ukukhipha amatshe, njll. Ngakho-ke, ukukhetha kuyindlela ebalulekile yokuhlanza ukungcola okuthile. Imishini yokukhetha evame ukusetshenziswa ifaka umshini wesilinda owenziwe ngaphakathi nomshini wokukhetha wokuvunguza.